Kaaliyaha Google ayaa durbaba tijaabinaya qaab cusub | Androidsis
Dhowr bilood ka hor in horeyba looga hadlay qorshayaasha la doonayo in la soo bandhigo interface cusub oo loogu talagalay Kaaliyaha Google. Shirkaddu waxay dooneysaa inay cusboonaysiiso is-dhexgalka kaaliyeheeda, si ay ugu fududaato isticmaalkeeda. Shirkaddu waxay hadda samaynaysaa tijaabooyin arrintan la xiriira, iyadoo tijaabineysa is-dhexgal cusub oo loogu talagalay kaaliyeheeda. Waxaa la filayaa inay si rasmi ah u timaado dhowr bilood kadib.
Cusbooneysiin ayaa loo bilaabay isticmaaleyaasha qaar, halkaas oo aan horayba u arki karno midka Waxay noqon laheyd naqshada cusub ee Kaaliyaha Google. Waxaan arki karnaa isbeddelada qaarkood, sida yareynta midabka cad ee dhexgalka, ama isticmaalka kaararka si loo qeybiyo waxyaabaha ka wanaagsan.
Kaadhadhku waa halyeeyada ku jira qaabkan kaaliyaha Google. Marka lagu daro lahaanshaha midab badan kiiskan, maaddaama ay ka go'an tahay saameyn hadh leh, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay noqdaan kuwo muuqaal ahaan xiiso badan oo si fiican u akhriya. Tani waxay sidoo kale u oggolaanaysaa inay si fiican uga soocnaadaan midba midka kale mar kasta.
Isbeddel kale oo ballan qaadaya inuu muhiimad leeyahay ayaa ah hadda macluumaadka waxaa loo soo bandhigi doonaa taariikh ahaan. Hab lagu arko wax walba jaleeco, fikrad cad ka haysta dhacdooyinka iyo ajandaha dhowr ilbiriqsi gudahood. Tani waa isbeddel ay isticmaalayaashu hubinayaan inay soo dhaweynayaan.
Naqshad cusub iyo qaab kale oo loo qaybiyo macluumaadka. Kuwani waa laba isbeddel oo aan filan karno inay ku yimaadaan Kalkaaliyaha Google dhowaan. Hadda adeegsadayaal kooban ayaa marin u heli kara cusbooneysiintan. Waxay umuuqataa inay tahay wax kujira wajiga tijaabada, sidaa darteed waxay u badan tahay inay qaadato waqti in la gaaro isticmaaleyaasha kale.
Waxba kama ogin goorta ay isticmaaleyaasha kale marin u helayaan horumarkan ku saabsan Kaaliyaha Google. Marka waxaan dheg u noqon doonnaa xogta ay shirkadda lafteedu la wadaageyso arrintan. Maaddaama ay tahay cusbooneysiin muhiim ah, marka lagu daro inay tahay isbeddel naqshad oo lagu dhawaaqay bilo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Kaaliyaha Google wuxuu tijaabiyaa isbeddelka isbeddelka
Xiaomi Mi Note 10 horeyba wuxuu u lahaa taariikhda imaatinka Yurub